Site na: KongoLisolona: November 9, 2019 00: 30 Enweghị asịsa
Otú ọ dị, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, mkpesa adịghị mma, kama nke ahụ, ọ dị njọ maka ahụ ike gị na ndị na-anụ mkpesa na-adịgide adịgide na-eche na enweghi nsogbu.
Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ bụ ndị mụtara ihe a na-esote nkwubi okwu ndị a. Mkpesa ndị na-aga n'ihu dị njọ maka ọnọdụ gị na nke ndị ọrụ na ndị enyi ha na-anụ ha. Ha na-emerụ ụbụrụ gị na ahụike gị n'ozuzu.
Nke a bụ ihe mere nkatọ ji dị njọ maka ahụ ike gị:
1. Ihe synapses nke ụbụrụ:
La ihe mbu nke neuroscience ụmụ akwụkwọ na-amụta bụ ọrụ synapses na ụbụrụ. A na-ekewapụ ndị a site na mgbatị synaptic. Mgbe ị nwere echiche ụfọdụ, synapse na-eziga mkpụrụ ndụ ọgwụ ndị ọzọ na sistemụ ọzọ nke ga-abụ ụzọ ntinye nke mgbaàmà na-ebu ozi. Ozugbo e mepụtara mgbaàmà eletriki, ụyọkọ synaptic na-ebelata iji belata ebe ọ ga-aga. Ya mere, ụbụrụ na-agbanwe n'ụzọ nkịtị iji wepụ echiche.
Ozugbo e mepụtara echiche ahụ, ọ ga-adịrị m mfe inwe ya n'oge na-adịghị anya, n'ihi na synapses maka mmepụta ya abanyela nso. Ainsi, avoir des pensées négatives fréquente facilite leur production et favorise leur apparition aléatoire, ce qui veut dire que cela peut affecter votre personnalité en entier et la rendre plus négative. Echiche dị mma ga-emetụ gị n'uche ma ọ bụrụ na ịnweghị ịmepụta usoro ha.
Achọrọ software iji jikwaa ọrụ gị? Họrọ ngwanrọ iji melite nhazi gị ma ọ bụ nlekọta azụmahịa iji nwee ike nyochaa azụmahịa gị. Oge eruola ka ị lekwasị anya na azụmahịa gị.
2. Ndị ọjọọ
N'otu ụzọ ahu echiche na-ezighi ezi na-abawanye, na-emekpu ubu na ndi na-adighi nma ga eme gi onye na-adighi nma. Mgbe anyị na-ahụ ụfọdụ mmetụta uche na ndị gbara anyị gburugburu, ụbụrụ anyị na-anwa ime ka otu synapses rụọ ọrụ iji nwee ike ịnwale ma ghọta otu mmetụta ahụ. A na-akpọ nke a ọmịiko.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ iji chekwaa nrụpụta gị ma ọ bụ ịmepụta synapses nke ụbụrụ gi n'echiche ziri ezi, wepụtakwu oge na ndị dị mma ma zere ndị na-ahụ ihe ọjọọ n'ebe niile.
Iji chekwaa ahụ ike nke ahụ gị, ị ghaghị ịkwụsị ịkatọ ma na-eche echiche ọjọọ. Mkpesa, ịkwa ákwá, na echiche ndị na-ezighị ezi nwere ike ime ka ọrịa shuga, oke ibu, ọrịa obi, ọbara mgbali elu, ma mee ka usoro ahụ ghara ịgwụ.
Tụkwasị na nke ahụ, ọnọdụ ọjọọ na-akwalite ihe nzuzo nke cortisol, hormone nchekasị, nke nwere mmetụta dị egwu n'ahụ gị. Ọ nwere ike ịkpata nsogbu obi, nsogbu ncheta na nsogbu ịmụta ihe, ụba cholesterol dị njọ n'ọbara na ọbara mgbali, ọrịa ọkpụkpụ (Osteoporosis), ike na-adịghị ike ọrụ na uru uru.
Enwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji gbanahụ nhụjuanya na ịgakwuru ndị na-amụmụ ọnụ ọchị na obi ụtọ ma na-efe efe.
Ọkt28 12: 20